မြန့်မာရိုးရာ အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်း- UpdateNew
မြန့်မာရိုးရာ အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်း-
May 22, 2020 UpdateNew အထွေထွေဗဟုသုတ 0
မြန့်မာရိုးရာ အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်း
အမျိုးသားနံ နှင့် အမျိုးသမီးနံ နှစ်ခု ပေါင်းရမည်။
ဥပမာ.. တနင်္ဂနွေ(၁) +ဗုဒ္ဓဟူး(၄) ၁+၄=၅. ဖြစ်သည်ရလဒ်ကို ၅ဖြင့် မြောက်ရမည် ။ ၂၅ ရသည်။ထို့၂၅ အား ၇ ဖြင့်စားရမည်။ အကြွင်း ၄ ရပါသည်။ထို့နောက် အကြွင်း ၄ ဟောကိန်းအား ဖတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
🔢၁ကြွင်း ။ ကြွင်းဧက စွဲမက်ဖွယ် မွဲတတ်တယ် မယိမ်း။
အလွန်ဆိုးသော အတွဲ ဖြစ်သည်။ ၂ ဦးပေါင်းစည်းက စီးပွား ဖြစ်ထွန်းကိန်းမရှိ၊ ငွေကြေး စုဆောင်း၍ မရ။ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်းခြင်းမရှိပဲ တရိရိနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေတတ်သည်။ တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်ဝယ် ဟုသောကိန်းနှင့် အဆုံးသတ်ရမည်။ ကြိုးစားရှာဖွေလေခက်ခဲ ကျပ်တည်းသော အနေထားမျိုးဖြစ်လေ ဟုသာ။
🔢၂ကြွင်း ။ ရှိအထင် ဒွိမြင်ကိန်း နှစ်သိန်းလောက်ကြွယ်ရာ။
အလွန်ကောင်းသော အတွဲဖြစ်သည်။ စီးပွားတက်မည်။အိမ်ထောင်ရေး သာယာချမ်းမြေ့မည်။ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း၊ ပြည့်စုံသာယာခြင်း၊အခွင့်လမ်း များစွာ ရရှိခြင်းများ ကြုံမည်။ဝန်ထမ်းများ ရာထူးဂုဏ်ရှိန် ကြီးမားမည်။မွေးဖွားသော သားသမီးများသည်လည်းကြွယ်ဝပြည့်စုံမည်။
🔢၃ကြွင်း ။ ရွှေသီတာစုံပျံမွှေး၊ ဂုဏ်ဟန့်သေး ဆင်းရဲလိမ့်သာ။
နှစ်ဦးပေါင်းဖက်၍ ကောင်းသောကျော်ကြားခြင်းများ ရှိသော်လည်း၊ စီးပွားတွင် ဖြစ်ထွန်းခြင်းမရှိ။ငွေ မည်မျှဝင်စေ ရသလောက်ပြန်ကုန်မည်။စီးပွားဖြစ်လိုက် ပြန်ကုန်လိုက်နှင့် ဘဝတူ အချင်းချင်းပင်မိမိက ပိုမို ချို့တဲ့သလိုဖြစ်နေမည်။
အလုပ်စီးပွားတွင် အောက်ကျ သလိုဖြစ်ပြီးမှ တော်သင့်ရုံပြေလည်မည်။ နှစ်ဦးပူးတွဲနေက ငွေကုန်များမည်၊လုပ်ငန်းသဘောအရ ခွဲခွာ လုပ်ကိုင်က ငွေစုဆောင်းမိမည်။သားသမီးများအား ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ပျိုးထောင်ရမည်။သားသမီးကောင်းကျိုးကိုဖြင့် ခံစားရမည်။
🔢၄ကြွင်း ။ လေးစတု ထင်ရှားစွာ။
အထူးကောင်းသော မိတ်ဖက်ဖြစ်သည်။ ကျော်ကြားအောင်မြင်ခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်ထွန်းခြင်း အထင်ရှားရှိမည်။ ဘဝတူတန်းတူများကြား အသာစီးရမည်။ လူတမ်းစေ့အထက် ပြည့်စုံစွာနေထိုင်ရမည်။ တဦးသော်ကောင်း ၊ ၂ဦးလုံးသော်ကောင်း နမည်ကြီး ၊ ထင်ရှားကျော်ဇောခြင်းများ ရရှိမည်။မွေးဖွားသော သားသမီးမှလည်း ကျော်ဇောစေ၍အကျိူးပေးမည် ဖြစ်သည်။
🔢၅ကြွင်း ။ ကြွက်ဇီဝါ ဆင်းရဲကင်း။
အလွန်ကောင်းသော မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲခြင်း ကင်းစင်၍ ကြွယ်ဝ ပြည့်စုံပြီး သာယာသော မိသားစု ဘဝလေးအား ပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ရာထူးဂုဏ်ရှိန်မြင့်မားမည်။ အသက်ကြီးလေ စီးပွားတိုးလေဖြစ်ပါသည်။ ခြွေရံသင်းပင်းပေါများမည်။သားသမီးအကျိုး ခံစားရမည်။ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲမှု့မျိုး ကြုံရပေမည်။
🔢၆ကြွင်း။ ပြင်ပပူးမင်းက သူဌေးမှန် ငြိမ်းလိမ့်နှစ်တန်။
နှစ်ဦးပေါင်းဖက်က သူဌေးသူကြွယ်ဘဝ ရရှိမည်။ ထီပေါက်ခြင်း ၊ အမွေရခြင်း ၊ ငွေအစုလိုက် ဝင်ခြင်း၊ငွေကြေးစုဆောင်းမှု့များ ရှိကာ ပေး၍မကုန် လှူ၍မခန်းဖြစ်မည်။ အတွင်းမီး အပြင်မီး ငြိမ်းအေး၍ လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသော ကုသိုလ်အကျိုးများ ခံစားရမည်။ သားသမီးများ ကောင်းကျိုး ခံစားရမည်။
🔢ဝြကွင်း။ သုညကျန်လျှင် လုံမမောင်နှံ အို ဆုံးနိုင်မျှလေး။
အလွန်ဆိုးသော အတွဲဖြစ်သည်၊ ပင်ပန်းကြီးစွာနှင့် စီးပွား ဥစ္စာ ရှာဖွေရမည်။ နှစ်ဦးပေါင်းဖက်သည့် နဂိုကာလမှစ၍ တဖြေးဖြေးကျဆင်းစေတက်သည်။ ဝင်သမျှငွေမှာအဖက်မတင်စေတတ်ပါ၊ အကျိုးမြတ်ရရှိ၍ စီးပွားဖြစ်ထွန်းလာသော်ငြားလည်း တခုမဟုတ်တခု စိတ်သောကရောက်စရာများ ကြုံစေတတ်သည်။
မိတ်ဆွေ အနေဖြင့် ဆိုးသောအတွဲများထဲတွင် ပါဝင်နေပါက ၊ စိတ်အနောက်ယှတ်ကြီးစွာဖြစ်ရန်မလိုပဲ ကံ၊ဉာဏ်၊ဝီရိယ၊ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ ၊ ဤ၆ပါးဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြင့် မျက်မှောက်ဘဝကို ဖြတ်သန်းသော် ဒုက္ခဆင်းရဲကင်းစင်နိုင်ပါကြောင်း…
မှတ်သားဖူးသော ပညာရပ်တခုအား တင်ပြပေးခြင်ုးဖြစ်ပါသည်။
ချမ်းသာ ကိုယ်စိတ် မြဲကြပါစေ ။Copy ကူးယူတင်ပါသည် ။
မွနျ့မာရိုးရာ အိမျထောငျဖကျ ရှေးနညျး
အမြိုးသားနံ နှငျ့ အမြိုးသမီးနံ နှဈခု ပေါငျးရမညျ။
ဥပမာ.. တနင်ျဂနှေ(၁) +ဗုဒ်ဓဟူး(၄) ၁+၄=၅. ဖွဈသညျရလဒျကို ၅ဖွငျ့ မွောကျရမညျ ။ ၂၅ ရသညျ။ထို့၂၅ အား ၇ ဖွငျ့စားရမညျ။ အကွှငျး ၄ ရပါသညျ။ထို့နောကျ အကွှငျး ၄ ဟောကိနျးအား ဖတျရမညျဖွဈသညျ။
🔢၁ကွှငျး ။ ကွှငျးဧက စှဲမကျဖှယျ မှဲတတျတယျ မယိမျး။
အလှနျဆိုးသော အတှဲ ဖွဈသညျ။ ၂ ဦးပေါငျးစညျးက စီးပှား ဖွဈထှနျးကိနျးမရှိ၊ ငှကွေေး စုဆောငျး၍ မရ။ကောငျးကြိုး ဖွဈထှနျးခွငျးမရှိပဲ တရိရိနှငျ့ ဆငျးရဲမှဲတတေတျသညျ။ တူနှဈကိုယျ တဲအိုပကျြဝယျ ဟုသောကိနျးနှငျ့ အဆုံးသတျရမညျ။ ကွိုးစားရှာဖှလေခေကျခဲ ကပျြတညျးသော အနထေားမြိုးဖွဈလေ ဟုသာ။
🔢၂ကွှငျး ။ ရှိအထငျ ဒှိမွငျကိနျး နှဈသိနျးလောကျကွှယျရာ။
အလှနျကောငျးသော အတှဲဖွဈသညျ။ စီးပှားတကျမညျ။အိမျထောငျရေး သာယာခမျြးမွမေ့ညျ။ကွှယျဝခမျြးသာခွငျး၊ ပွညျ့စုံသာယာခွငျး၊အခှငျ့လမျး မြားစှာ ရရှိခွငျးမြား ကွုံမညျ။ဝနျထမျးမြား ရာထူးဂုဏျရှိနျ ကွီးမားမညျ။မှေးဖှားသော သားသမီးမြားသညျလညျးကွှယျဝပွညျ့စုံမညျ။
🔢၃ကွှငျး ။ ရှသေီတာစုံပြံမှေး၊ ဂုဏျဟနျ့သေး ဆငျးရဲလိမျ့သာ။
နှဈဦးပေါငျးဖကျ၍ ကောငျးသောကြျောကွားခွငျးမြား ရှိသျောလညျး၊ စီးပှားတှငျ ဖွဈထှနျးခွငျးမရှိ။ငှေ မညျမြှဝငျစေ ရသလောကျပွနျကုနျမညျ။စီးပှားဖွဈလိုကျ ပွနျကုနျလိုကျနှငျ့ ဘဝတူ အခငျြးခငျြးပငျမိမိက ပိုမို ခြို့တဲ့သလိုဖွဈနမေညျ။
အလုပျစီးပှားတှငျ အောကျကြ သလိုဖွဈပွီးမှ တျောသငျ့ရုံပွလေညျမညျ။ နှဈဦးပူးတှဲနကေ ငှကေုနျမြားမညျ၊လုပျငနျးသဘောအရ ခှဲခှာ လုပျကိုငျက ငှစေုဆောငျးမိမညျ။သားသမီးမြားအား ပငျပနျးဆငျးရဲစှာ ပြိုးထောငျရမညျ။သားသမီးကောငျးကြိုးကိုဖွငျ့ ခံစားရမညျ။
🔢၄ကွှငျး ။ လေးစတု ထငျရှားစှာ။
အထူးကောငျးသော မိတျဖကျဖွဈသညျ။ ကြျောကွားအောငျမွငျခွငျး၊ စီးပှားဖွဈထှနျးခွငျး အထငျရှားရှိမညျ။ ဘဝတူတနျးတူမြားကွား အသာစီးရမညျ။ လူတမျးစအေ့ထကျ ပွညျ့စုံစှာနထေိုငျရမညျ။ တဦးသျောကောငျး ၊ ၂ဦးလုံးသျောကောငျး နမညျကွီး ၊ ထငျရှားကြျောဇောခွငျးမြား ရရှိမညျ။မှေးဖှားသော သားသမီးမှလညျး ကြျောဇောစေ၍အကြိူးပေးမညျ ဖွဈသညျ။
🔢၅ကွှငျး ။ ကွှကျဇီဝါ ဆငျးရဲကငျး။
အလှနျကောငျးသော မိတျဖကျဖွဈပါသညျ။ ဆငျးရဲခွငျး ကငျးစငျ၍ ကွှယျဝ ပွညျ့စုံပွီး သာယာသော မိသားစု ဘဝလေးအား ပိုငျဆိုငျမညျဖွဈသညျ။ ဝနျထမျးဖွဈပါက ရာထူးဂုဏျရှိနျမွငျ့မားမညျ။ အသကျကွီးလေ စီးပှားတိုးလဖွေဈပါသညျ။ ခွှရေံသငျးပငျးပေါမြားမညျ။သားသမီးအကြိုး ခံစားရမညျ။ ရရှေညျတညျတံ့ ခိုငျမွဲမှု့မြိုး ကွုံရပမေညျ။
🔢၆ကွှငျး။ ပွငျပပူးမငျးက သူဌေးမှနျ ငွိမျးလိမျ့နှဈတနျ။
နှဈဦးပေါငျးဖကျက သူဌေးသူကွှယျဘဝ ရရှိမညျ။ ထီပေါကျခွငျး ၊ အမှရေခွငျး ၊ ငှအေစုလိုကျ ဝငျခွငျး၊ငှကွေေးစုဆောငျးမှု့မြား ရှိကာ ပေး၍မကုနျ လှူ၍မခနျးဖွဈမညျ။ အတှငျးမီး အပွငျမီး ငွိမျးအေး၍ လောကီလောကုတ်တရာနှဈဖွာသော ကုသိုလျအကြိုးမြား ခံစားရမညျ။ သားသမီးမြား ကောငျးကြိုး ခံစားရမညျ။
🔢ဝွကှငျး။ သုညကနျြလြှငျ လုံမမောငျနှံ အို ဆုံးနိုငျမြှလေး။
အလှနျဆိုးသော အတှဲဖွဈသညျ၊ ပငျပနျးကွီးစှာနှငျ့ စီးပှား ဥစ်စာ ရှာဖှရေမညျ။ နှဈဦးပေါငျးဖကျသညျ့ နဂိုကာလမှစ၍ တဖွေးဖွေးကဆြငျးစတေကျသညျ။ ဝငျသမြှငှမှောအဖကျမတငျစတေတျပါ၊ အကြိုးမွတျရရှိ၍ စီးပှားဖွဈထှနျးလာသျောငွားလညျး တခုမဟုတျတခု စိတျသောကရောကျစရာမြား ကွုံစတေတျသညျ။
မိတျဆှေ အနဖွေငျ့ ဆိုးသောအတှဲမြားထဲတှငျ ပါဝငျနပေါက ၊ စိတျအနောကျယှတျကွီးစှာဖွဈရနျမလိုပဲ ကံ၊ဉာဏျ၊ဝီရိယ၊ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ ၊ ဤ၆ပါးဖွငျ့ ပွညျ့စုံစှာဖွငျ့ မကျြမှောကျဘဝကို ဖွတျသနျးသျော ဒုက်ခဆငျးရဲကငျးစငျနိုငျပါကွောငျး…
မှတျသားဖူးသော ပညာရပျတခုအား တငျပွပေးခွငျုးဖွဈပါသညျ။
ခမျြးသာ ကိုယျစိတျ မွဲကွပါစေ ။Copy ကူးယူတငျပါသညျ ။
အဲယားကွန်းတက်ဆင်ရန် အခန်းတစ်ခန်းရဲ့ cooling load ကို တွက်ချက်ခြင်း-